कसरी नेकपा (एस) सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो ? यस्तो छ हिसाव किताब - Reel Mandu
कसरी नेकपा (एस) सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो ? यस्तो छ हिसाव किताब
काठमाडौ । सुदूरपश्चिममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोज्ने प्रदेश सांसदको संख्या १४ पुगेको छ । आइतबार बझाङकी समानुपातिक प्रदेश सांसद माया तामाङ बोहराले समाजवादीमा सनाखत गरेसँगै १४ पुगेको हो । यसअघि १३ प्रदेशसभाका सांसदले नेकपा एमाले छोड्दै नवगठित समाजवादीमा सनाखत गरेका थिए । तामाङ आएसँगै नेकपा एस १४ सांसदसहित सुदूरपश्चिम प्रदेसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको हो ।
सरकारले हालै ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१ दिन अर्थात २२ भदौसम्म दल रोज्न पाउने छन् । न्युज कारखाना